ဘာသာရေးဟာသ - Myanmar 3AM
LaiSiangtho Dotna & Dawnna
LaiSiangtho Sim Nang Khawk
LaiSiangtho Sin Zia
LaiSiangtho Theihhuai TuamTuam
Media Laibu Saal
တစ်နေ့ကျတော့ တရားဟောကောင်းတဲ့ဆရာတစ်ပါး နယ်လှည့်တရားဟောပါတယ်။ တရားပွဲတွေကျင်းပလေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒီရွာမှာ အလွန်မှပင်တက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ သူမဟာ ဆိုရင်-ဘယ်သူတရားဟောဟော၊ သူမစိတ်တို့ထိပြီဆိုရင်-‘အာမင်’ လို့ထထပြောလေ့ရှိတယ်။
နယ်လှည့်ဆရာကြီးရဲ့ တရားပွဲလေးမှာလဲ အဲ့လိုပဲ ဆရာကတစ်ခွန်းဟ လိုက်တိုင်း သူက “အာမင်!” လို့ထထအော်တယ်တဲ့။ အစပိုင်းမှာအဆင်ပြေပေမယ့် ညတိုင်းလိုလို ဖြစ်ပြီး၊ ဆရာတစ်ကြောင်း၊ သူတစ်ခွန်းဖြစ်နေတာမို့ အဲ့ဒီည တရားပွဲအဆုံးမှာ ဆရာကအဒေါ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတိုးတိုးလေးနဲ့ – “အဒေါ်ဒီလိုလုပ်ရအောင်လားဗျာ လာမယ့်ညတွေ တရားဟောပွဲပြီးတဲ့အထိ ‘အာမင်’ မခေါ်ဘဲ တရားကိုကောင်းကောင်း နားထောင်ပေးနိုင်မလား။ ဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် စောင်ကောင်းကောင်းတစ်ထည် လက်ဆောင်ပေးမယ်ဗျာ၊” တဲ့။ ဒီတော့ နှစ်ဦးသားသဘောတူကြပြီး၊ ‘အာမင်’ သံထိုအဒေါ် ဆီကနေလုံးဝမကြားရတော့ဘူး။
ဖြစ်ချင်တော့ နောက်ဆုံးညကြတော့ တရားဟောအရှိန်ကလည်းတက်၊ နှစ်ခြင်းခံယူ မယ့်သူတွေကလဲရှိနေတော့၊ အဒေါ်ကြီးကသာ ‘အာမင်’ မပြောတာ အချို့သူတွေက အခြေအနေပေးတိုင်း အသံမြိုင်မြိုင်နဲ့ ‘အာမင်’ လို့ပြောကြပါလေရော။ နောက်ဆုံးည လည်းဖြစ်၊ လူထုကလည်းများ၊ တရားဟောဆရာလည်း အစွမ်းကုန်ဟောနေတော့၊ အဒေါ်ကြီးခမျာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး၊ သည်းခံနိုင်စွမ်းကုန်တော့တာ။ ဘယ်ရမလဲ သူမလည်းထပြီးတော့ ” စောင်ရရမရရ ‘အာမင်!!!’ ” လို့ပြောချလိုက်ပါသတဲ့ဗျာ။
ဂျာ့ရှ် တို့ လင်မယားတွင် ကလေးနှစ်ယောက်ရှိ၏။ နှစ်ကောင်လုံးမှာ ပြဿနာအလွန်ရှာသည်။ တစ်ကောင် က ၈ နှစ် နောက်တစ်ကောင်က ၁၀ နှစ်ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲတွင် အသံမကြားလိုက်နဲ့ ကြားလိုက်တာနဲ့ သူ့သားနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ခဏခဏအတိုင်ခံကြရသည်။
သူတို့ ရပ်ကွက်ရှိ church မှ ဘုန်ကြီးတစ်ပါးသည် ကလေးများကိုသွန်သင်ရာတွင် အလွန်တော်သည်ဟု နာမည်ကြီးသဖြင့် ထိုကလေးနှစ်ယောက်ကို ပို့ရန် ပြင်လေသည်။ ပထမ အငယ်ကောင်ကို အရင် ပို့သည်။
church ရောက်တော့ အငယ်ကောင်ကို ဘုန်းကြီးက လေသံပျော့ပျော့ ဖြင့် ချော့ပြောသည် ” ဘုရားသခင် ဘယ်မှာလဲ သိလား”
အငယ်ကောင်မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် ဘာမှပြန်မပြောပဲ ကြည့်နေသည်။
တစ်ခါ မေးမရ နှစ်ခါ မေးမရ ကြာတော့ စိတ်တိုလာပြီး ဘုန်ကြီးက အော်တော့သည်။
မင်းငါမေးနေတာ မကြားဘူးလားကွ ။ မင်းနားပင်းနေလား။ ဘုရားသခင် ဘယ်မှာလဲလို့…………..
အငယ်ကောင်မှာ ငို ပြီး အိမ်သို့ တန်းပြေးလာကာ ဗီရိုထဲ ဝင်ပုန်းနေလေသည်။
အကြီးကောင်က ” မင်းကို ဘုန်ကြိးက ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ”
” အခြေအနေ မကောင်းဘူ။ အခုသူတို့ ဘုရားပျောက်နေတယ် ။ အဲဒါ ငါတို့ လုပ်တယ်ထင်နေတယ်”
ချီကာဂိုမြို.မှ ဆာရာဂိုးစတိန်း ဆိုသူ အမျိုးသမီးကြီးသည် မိမိ မရောက်ဘူးတဲ့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်သို. ခရီးထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ရောက်သောအခါ ဟိုတယ်တစ်ခုသို.၀င်တယ်။ဒီဟိုတယ်မှာ အချို.လူမျိုးကို လက်မခံသော ဟိုတယ်ဖြစ်တယ်။
ဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုမစ် ဂိုးလ်စတိန်းက ပြောတယ်။ ” နှစ်ပတ်ကြာနေဖို့ ကျွန်မ အခန်းတစ်ခန်းလိုချင်တယ်။ ”
မန်နေဂျာ က ပြန်ပြောတယ်။ ” ၀မ်းနည်းပါတယ်… ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အခန်းလွတ်မရှိပါဘူး။
ထိုအချိန်တွင် ဧည့်သည်တယောက် အခန်းလာအပ်တာကိုတွေ.ရတော့ ၀မ်းသာအားရ ပြောတယ်။
” ကြည့်စမ်း.. အဆင်ပြေလိုက်တာ။ အခန်းတခန်း လွတ်သွားပြီလေ။ အဲဒီအခန်းကျွန်မကိုပေးလို.ရပြီပေါ.။ ”
“ဒီလိုလွယ်လွယ် တွက်လို.မရဘူး။.. ကျွင်္နတော်တို.ဆီမှာ ဂျူးလူမျိုးတွေကို လက်မခံပါဘူး။ ”
” ဘယ်သူလဲ ဂျူးလူမျိုး.. ကျွန်မလား..ကျွန်မ ကတ်သိုလစ် ဘာသာဝင်ရှင့် ”
” ဒါကို ယုံကြည်ဖို. ခက်ပါတယ်။ မေးခွင်.ပြုပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ သားတော်ဟာဘယ်သူပါလဲ။ ”
” မယ်တော် မေရီ ကမွေးတဲ့ ယေရှု သခင်ပေါ့ရှင်. …”
” သူ. ကိုဘယ်မှာမွေးတာလဲ။ ”
” နွားတင်းကုတ်မှာ ”
” ဘာဖြစ်လို. နွားတင်းကုတ်မှာမွေးရတာလဲ …။”
” နင်တို.လို အကောင်မျိုးတွေကြောင့် မယ်တော် မေရီ အခန်းငှားမရလို.တဲ့ဟေ့..။”
Choosealanguage Myanmar Zomi